kapil sharma | Ratopati
कपिल शर्मा शोका कलाकारले प्रत्येक भागका लागि कति पारिश्रमिक लिन्छन् ? access_timeचैत २९, २०७७
सोनी टिभीमा प्रसारण हुने द कपिल शर्मा शो टिभीको दुनियाँका सर्वाधिक चर्चित हास्यकलाकारमध्ये एक हुन् । यो शोलाई भारतमा मात्रै होइन नेपालमा पनि धेरै मानिसहरुले रुचाउँछन् । कार्यक्रममा थुप्रै चर्चित कलाकारले आफ्नो प्रस्तुती दिने गर्छन् । तर के तपाईंलाई यो शोको एक एपिसोडका ल...
बिना काम घरमा बसिरहेका कपिल शर्मासँग जब प्रशंसकले मागे काम, दिए यस्तो जवाफ access_timeचैत २५, २०७७
भारतीय हास्यकलाकार कपिल शर्मा इन्डष्ट्रिको एक चर्चित नाम हो । कपिल शर्माको चर्चित ‘द कपिल शर्मा शो’ यसै वर्ष फेब्रुअरीदेखि बन्द भएको छ । यो कुराले कपिलका प्रशंसकलाई एक किसिमको खालीपन दिएको छ । कपिललले ट्वीटरमा हालै शो पुनः सुरु हुन लागेको बारे घोषणा गरेक...
ह्विलचेयरमा किन देखिए कपिल शर्मा ? बताए यस्तो कारण access_timeफागुन ११, २०७७
भारतीय हास्यकलाकार कपिल शर्मा सोमबार विमानस्थलमा देखिए । यतिबेला उनी ह्विलचेयरमा देखिए । कपिललाई यसबारे सोध्दा उनी फोटोग्राफरमाथि भड्किएका थिए । कपिल ह्विलचेयरमा किन थिए ? यसबारे चर्चा तीब्र छ । अब यसबारे कपिल आफैंले जानकारी दिएका छन् । कपिललाई ब्याक इन्जुरीः ...
द कपिल शर्मा शोमा सुनिल ग्रोवरको फिर्ती ? यी सुपरस्टारले गराइदिए पुनः दोस्ती access_timeफागुन ४, २०७७
दर्शकलाई अत्यधिक हसाउने द कपिल शर्मा शो हाल बन्द छ । शोको अचानक प्रसारण बन्द हुँदा धेरैलाई खल्लो पनि महसुस भइरहेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमलाई विश्वास गर्ने हो भने द कपिल शर्मा शो नयाँ स्वाद र क्रिएटिभिटीसँगै जुलाईमा फिर्ता हुनेछ । नयाँ कार्यक्रमले दर्शकलाई अझै खुसी ...
प्रशंसकले सोधे कपिल शर्मालाई छोराको नाम, दिए यस्तो जवाफ access_timeमाघ २५, २०७७
छोरीका आमाबुवा बनेपछि कपिल शर्मा र उनकी श्रीमती गिन्नी चतरथ दोस्रो पटक आमाबुवा बनेका छन् । भारतीय हास्यकलाकारले यो खबर आफ्नो सोसल मिडिया अकाउन्टमार्फत् सेयर गरेका थिए । के राखे कपिल शर्माले छोराको नाम ? कपिल शर्माले ट्वीट गर्दै लेखे, ‘हाम्रो सानो छो...
कपिल दोस्रो बच्चाको बाबु बनेलगतै युजरले सोधे- यति हतार किन ? access_timeमाघ १९, २०७७
मुम्बई । कमेडियन कपिल शर्मालाई पुत्र लाभ भएको छ । उनकी श्रीमती गिन्नी चतरथले सोमबार छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । अहिले कपिल दोस्रो पटक बुबा बनेका हुन् । बुबा बनेको समाचार बाहिर आएपछि उनलाई फ्यानले बधाई दिइरहेका छन् । कपिल एक वर्ष अगाडि पनि बुबा बनेका थिए । यहि ...
कपिल शर्मा शो किन बन्द हुँदैछ ? कपिल आफैंले बताए यस्तो कारण access_timeमाघ १६, २०७७
भारतीय हास्य कलाकार कपिल शर्मा र उनकी श्रीमती गिन्नी चतरथ चाँडै नै दोस्रो सन्तानलाई स्वागत गर्ने तयारीमा छन् । यो कुराको खुलासा कपिल शर्मा आफैंले दिएका हुन् । ट्वीटरमा गरिएको प्रश्नोत्तर सेसनमा उनले सो कुरा बताएकाह हुन् । यसबाहेक कपिल आफैंले कपिल शर्मा शो बन्द हुन...
द कपिल शर्मा शो चाँडै बन्द हुने access_timeमाघ १२, २०७७
सोनी टिभीमा प्रसारण हुने कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ भारतमालगायत नेपालमा पनि चर्चित छ । मानिसहरुलाई कपिल शर्मा र उनको टिमको कमेडी असाध्यै मन पर्छ । पछिल्लो थुप्रै वर्षदेखि यो टिभी शोमार्फत् कपिल शर्मा सानो पर्दामा राज गरिरहेका छन् । थुप्रै पटक बन्द भएपछि पन...
कपिल शर्मासँगको झगडा बिर्सिसकेका छन् सुनिल ग्रोवरः भने, ‘कहिल्यै रिसाउन सक्दिनँ’ access_timeमाघ ६, २०७७
तान्डवमा आफ्नो कामका लागि सुनिल ग्रोवरको अत्यधिक तारिफ भइरहेको छ । यद्यपि, प्रशंसकले द कपिल शर्मा शोमा गुत्थीको उनको भूमिका सायदै कहिल्यै बिर्सन सक्लान् । एक समय थियो जब सुनिल ग्रोवर द कपिल शर्मा शोमा अनौठा भूमिका निभाएर दर्शकलाई हसाउने गर्दथे । सबैकुरा राम्रो चलिरहेको...
कपिल शर्मा दोस्रो पटक बुवा बन्दै access_timeमंसिर ५, २०७७
भारतका चर्चित हास्यकलाकार कपिल शर्माको परिवारमा दोस्रो सन्तानको जन्म हुँदैछ । भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकका अनुसार कपिलकी श्रीमती दोस्रो पटक गर्भवती छिन् र २०२१ जनवरीमा उनको ड्यू डेट छ । जानकारीका अनुसार कपिलकी आमा मुम्बई पुगिसकेकी छिन् र चाँडै नै उनको बाँकी ...
कपिल शर्माको शोमा पुनः नवजोत सिंह सिद्धूको ‘इन्ट्रि’ ? यो कुराले दिइरहेको छ ‘हिन्ट’ access_timeकात्तिक २७, २०७७
भारतका हास्यकलाकार कपिल शर्माको टिभी शो द कपिल शर्मा शोमा एकपटक पुनः परिवर्तन देख्न सकिनेछ । उक्त कार्यक्रममा नवजोत सिंह सिद्धू फिर्ता हुने अनुमान भारतका थुप्रै मिडियाले गरेका छन् । बुधबार कपिल र नवजोत सिंह सिद्धूको भेटघाट भएको थियो । यसका केही तस्बिर सोसल मिडियामा ...
के डिजिटल डेब्यूका लागि २० करोड पारिश्रमिक लिइरहेका छन् कपिल शर्मा ? access_timeकात्तिक ४, २०७७
हास्यकलाकार कपिल शर्मा टिभी इन्डष्ट्रिका चर्चित हस्ती हुन् । उनले टेलिभिजनमा त आफ्नो क्षमता पुष्टि गरिसकेका छन्, त्यस्तै बलिउड सेलिब्रिटी बीच पनि उनी निकै चर्चित छन् । कपिल वेब सिरिजमार्फत् चाँडै नै डिजिटल डेब्यू गर्ने तयारीमा छन् । तर रोचक कुरा के छ भने यो डेब्यूका लागि उनी...
कपिल शर्मा हरेक एपिसोडको लिन्छन् यति पारिश्रमिक, कृष्णा र भारतीको कति होला ? access_timeभदौ ३१, २०७७
कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ नरुचाउने सायदै कम होलान् । कपिल शर्मा शोका स–साना भिडियो क्लिपले थुप्रै पटक हसाउने गर्दछ तर पछिल्लो पटक एउटा भिडियो निकै चर्चित भएको छ । उक्त क्लिपमा उदित नारायण पाहुनाको रुपमा आएका छन् । एक एपिसोडका लागि उदित नारायणले...
‘द कपिल शर्मा शो’ बहिष्कारको माग किन उठ्यो ? access_timeभदौ ९, २०७७
सुशान्त सिंह राजपूतका प्रशंसकले ‘द कपिल शर्मा शो’ लाई प्रतिबन्ध गर्न माग गरिरहेका छन् । कार्यक्रमका निर्मातामा सलमान खानको नाम पनि समावेश भएका कारण सुशान्तका प्रशंसकले यस्तो माग गरिरहेका छन् । फेसबुकमा सोमबार एक प्रयोगकर्ताले जस्टिस फर सुशान्त सिंह राजपूत...
सलमानले कपिल र सुनिललाई एकैसाथ ल्याए access_timeपुस ६, २०७६
सलमान खानका भाइ एवं नायक सोहेल खानले हालै आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । नायकले मुम्बईमा रहेको आफ्नो घरमा जन्मदिनको पार्टी राखे । उक्त पार्टीमा उनका परिवारका सदस्यका साथै फिल्म इन्डष्ट्रिका केही हस्तीको पनि उपस्थित भयो । नेहा धुपिया, अंगद बेदी, हिमेश रशेमिया, रितेश देशमुख...
कपिलले संजयलाई सोधेका थिए ३ सय ८ प्रेमिकाबारे प्रश्न, भड्किइन् यी नायिका access_timeमंसिर २२, २०७६
हास्यकलाकार कपिल शर्माले आफ्नो कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ मा संजय दत्तलाई उनका प्रेमिकासँग सम्बन्धित प्रश्न सोधेका थिए । कपिलले सोधेका थिए, ‘आखिर तपाईंले यत्तिका युवतीलाई कसरी आफ्नो प्रेमिका बन्न राजी बनाउनुभयो ?’ यसबारे संजय दत्तले आफूले अहिले...
अक्षय कुमारले फोटो सेयर गर्दा कपिल शर्माले भने, ‘तपाईंको भन्दा मेरै अघि आउँछ ‘गुड न्यूज’’ access_timeकात्तिक २९, २०७६
अक्षय कुमारको फिल्म ‘गुड न्यूज’ क्रिसमसको मौकामा रिलिज हुनेछ । यो फिल्ममा उनीसँग करिना कपुर, दिलजीत दोसांझ र कियारा आडवाणी पनि देखिनेछन् । अक्षय कुमारले यो फिल्मको पहिलो पोस्टर सेयर गरेका छन् । उनले सेयर गरेको यो पोस्टरमाथि निकै प्रतिक्रिया आइरहेका छ...
कपिल शर्माले डिसेम्बर ११ देखि केही पनि काम नगर्ने, कारण यस्तो access_timeकात्तिक २३, २०७६
भारतीय हास्यकलाकार चाँडै नै पिता बन्न लागेका छन् । केही महिनाअघि उनले आफ्नी श्रीमती गिन्नी चतरथसँग समय बिताउनका लागि ‘द कपिल शर्मा’ शोबाट १० दिन ब्रेक लिएका थिए । त्यतिबेला कपिल गिन्नीसँग क्यानडा गएका थिए । कपिलले अर्को महिनादेखि पुनः छुट्टी लिने भएका छ...